Faahfaahin ku saabsan Shabaab oo ku dhawaad 100 qof ku xiray Awdheegle iyo sababta ka dambeyso - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Faahfaahin ku saabsan Shabaab oo ku dhawaad 100 qof ku xiray Awdheegle iyo sababta ka dambeyso
Awdheegle (Caasimadda Online) – Dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gobalka Shabeelaha Hoose ayaa la sheegay in ku dhawaad 100 qof ay ku qabtayn Howlgal ay ka sameeyeen degmada Awdheegle ee shabeelaha Hoose.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in 76 qof oo isugu jira Carruur iyo dad waayeelo ah ay ku xirayn degmadaasi, dadka la xiray ayaa la sheegay in intooda badan ay ahaayeen dadkii shalay Ciidamada Dowladda hadalka u jeediyeen markii ay qabsadeyn Degmadaasi.
Shabaab ayaa dadkaan isugu geeyay barxad ku taala Awdheegle waxayn ku tilmaamayn shacab laba wajiile ah, lama oga nuuca ciqaabta ay marsiin doonaan balse waxaa jira walaac laga qabo sida dadkaasi ka yeeli doonaan Shabaab.
Ciidamada Dowladda ayaa shacabka Awdheegle shalay la kulmay waxayna qaar ka mid ah shacabka ku wareejiyeen Ciidamada qalab ay ka mid ahaayeen Moobeelo Sim-cards iyo agabyo kale.
Mas’uuliyiinta gobalka Shabeelaha Hoose ayaa Ciidamada iyo saraakiishooda ku eedeeyay mas’uuliyad darro maadaama halis geliyeen amaanka dadkiii ku noolaa goobihii ay ka soo laabtayn.
The post Faahfaahin ku saabsan Shabaab oo ku dhawaad 100 qof ku xiray Awdheegle iyo sababta ka dambeyso appeared first on Caasimada Online.